गुलाबी ओपल पत्थरलाई घण्टी, हार, झुम्का, ब्रेसलेट - भिडियोको रूपमा सेट गर्न सकिन्छ
हामी रि pink्गहरू, झुम्का, हार, कंगन वा लटकनको रूपमा गुलाबी ओपल पत्थरको साथ कस्टम गहनाहरू बनाउँछौं। गुलाबी ओपल अक्सर सगाई घण्टीको रूपमा गुलाब सुनमा सेट हुन्छ।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक गुलाबी ओपल किन्नुहोस्
यो रत्न मात्र पेरूको एन्डिज पर्वतमा फेला पर्दछ। वास्तवमा, उनीहरूलाई पचमामाले दिएको उपहारका रूपमा मानिन्छ, फलफूल र आमा पृथ्वीको प्रारम्भिक ईन्का देवी। ओपल एक कडा सिलिका जेल हो, प्राय: to देखि १०% पानी सम्म। त्यसकारण यो गैर क्रिस्टललाइन हो, अन्य सबै रत्नहरूको विपरीत।
सूत्र: SiO2 • n (H2O)
विशिष्ट गुरुत्व: २.१० g / cc
पानी सामग्री: 3.20.२०%
मोहको स्केल 5.5..6-।
पेरूबाट गुलाबी ओपल
पेरू ओपलको समग्र पहलुहरू
फलकहरू पेरुवाई ओपलका ढुङ्गाहरू एक शान्त पत्थर हो जसले दिमागलाई शुद्ध पार्न र नींदको समस्यालाई कम गर्न सक्छ। एक पेरूभियन ओपलसँग सुत्नु भनेको तपाईंको अतीतबाट अवचेतन दुखाइको उपचार गर्नु हो।
ढु stone्गामा आराम गर्ने शक्ति छ, परम्पराले हामीलाई भन्छ कि यसले सञ्चारबाट कुनै पनि तनाव हटाउन सक्छ र विचारहरूलाई उदार रूपमा प्रवाह गर्न अनुमति दिनेछ। यो दिमाग शान्तका लागि उत्कृष्ट ढु stone्गा हो र राम्रो रातको निद्राका लागि उपयोगी मानिन्छ।
यो ढु stone्गा हृदय चक्रसँग सम्बन्धित छ, उर्जा चिन्ता र सञ्चारको साथ केन्द्रित। यो सबै उपचार ढु stones्गा को सबैभन्दा शक्तिशाली हो भनिन्छ। यसले रचनात्मकता र प्रेरणा बढाउन सक्छ, ढु stone्गा राम्रो भाग्यसँग सम्बन्धित छ।
ढु stone्गाको अर्थ आत्मिक उपचार हो। यो एक महान चिकित्सा रत्नको रूपमा पालेको छ। यो तनाव जारी गर्न र शान्ति ल्याउन भनिन्छ। यो तनाव र चिन्ता गर्ने झुकाव भएका व्यक्तिहरूको लागि सिफारिस गरिएको हो। यसले कुनै पनि प्रकारको तनाव मुक्त गर्न सक्छ।
माइक्रोस्कोप अन्तर्गत नमूना
गुलाबी ओपल कति दुर्लभ छ?
ढु stone्गा धेरै दुर्लभ छ र पृथ्वीमा केही स्थानहरूमा मात्र फेला पर्दछ। खानी हुँदा ढु stones्गा एक सेतो गुलाबी हुन्छ।
तपाईं कसरी गुलाबी ओपल प्रयोग गर्नुहुन्छ?
आध्यात्मिक रूपमा यसले शान्ति ल्याउँछ र कसैको मुटुमा रिलीज हुन्छ, जसले कसैलाई विगतको आघात, तनाव र तनाव उत्पन्न गर्न अनुमति दिन्छ। यो स्वर्गदूतको क्षेत्रहरूमा कसैको सम्पर्क राख्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ खुला र स्पष्ट। भावनात्मक हिसाबले ढु stone्गाले उनीहरूलाई मद्दत गर्दछ जसले अत्यधिक डर, चिन्ता वा चिन्ता गर्दछ।
के तपाईं पानीमा गुलाबी ओपल राख्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईंले सुक्खा ठाउँमा भण्डार गर्नुभयो भने रत्न अपारदर्शी हुन्छ। यसले प्राकृतिक रूपमा पानी समावेश गर्दछ र छिद्रयुक्त छ। तपाईं यसलाई पानीमा वा भिजेको कपासमा राख्न सक्नुहुन्छ वर्षौंसम्म यसलाई भण्डारण गर्न।
के गुलाबी ओपल मूल्यवान छ?
राम्रो गुणको सोनेटहरू अविश्वसनीय सुन्दर हुन सक्छन् र प्रति क्यारेटको मूल्य १०० अमेरिकी डलरसम्म लिन सक्दछ। यी र factors्ग, स्पष्टता, कटौती र क्यारेट वजन सहित समग्र मानहरू निर्धारण गर्दछ।
तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि गुलाबी ओपल वास्तविक हो?
अधिकांश वास्तविक opals रंग मा अनियमितताहरु, वा आकार घुमाएको वा बम्पि आफ्नो प्राकृतिक गठन को कारणले गर्दा मानव निर्मित ढु stone्गा उत्तम देखिन्छ।
हाम्रो मणि पसलमा प्राकृतिक गुलाबी ओपल खरीद गर्नुहोस्
हामी गुलाबी ओपल ढु stone्गाको साथ कस्टम गहनाहरू बनाउँदछौं रिंगहरू, हार, झुम्का, कंगन वा लटकनको रूपमा। गुलाबी ओपल अक्सर सगाई घण्टीको रूपमा गुलाब सुनमा सेट हुन्छ।